YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, July 17
By Thar Zaw
မင်းကိုနိုင်၏ နောက်ကြည့်မှန်ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမည်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မင်းကိုနိုင်၏ ၁၉၈၆ ခုနှစ်က ရေးသားခဲ့သော နောက်ကြည့်မှန် လုံးချင်းဝတ္ထုကို ဒါရိုက်တာဝင်းထွန်းထွန်းက ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရန် ၀ယ်ယူသွားကြောင်း ဦးမင်းကိုနိုင်က7Day News သို့ ပြောသည်။ ''ကျွန်တော့်ဝတ္ထုကို အားပေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့ ကိုဝင်းထွန်းထွန်းက ၀ယ်ယူတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ငွေရေး ကြေးရေးက အဓိကမကျပါဘူး။ ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့အပိုင်းကိုလည်း ၀င်စွက်ဖက်ဖို့ မရှိပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၆ နှစ် စစ်အာဏာသိမ်းပြီး စတုန်းက တစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲ ရေးပြီး မပြင်တော့တဲ့ ၀တ္ထုလေးကို ငယ်လက်ရာလေးအတိုင်း နုပျိုမှုလေးတစ်ခုအနေနဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ"ဟု ဦးမင်းကိုနိုင်က ပြောသည်။
''နောက်ကြည့်မှန်'' ၀တ္ထုကို ပေါ်ပြူလာနယူးစ်ဂျာနယ်တွင် အခန်းဆက်အဖြစ် ၂၄ ပတ်တိုင်တိုင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး အရှေ့ကြယ်စာအုပ်တိုက်မှ ယခုလဆန်းပိုင်းတွင် လုံးချင်းဝတ္ထုအဖြစ် ပထမအကြိမ် ထွက်ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ၀တ္ထုကို ဒါရိုက်တာဝင်းထွန်းထွန်းက ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရန်အတွက် လက်ရှိရုပ်ရှင်လောကတွင် ၀ယ်ယူနေကြသော ၀တ္ထုဇာတ်လမ်းများ၏ ပေါက်ဈေးအတိုင်း အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်မည့်သရုပ်ဆောင်၊ စတင်ရိုက်ကူးမည့်နေ့ရက် စသည့်အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မဆွေးနွေးရသေးကြောင်း ဦးမင်းကိုနိုင်က ပြောသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/17/20120အကြံပြုခြင်း
ဒုတိယသမ္မတ အမည်စာရင်းကို ထပ်မံတင်သွင်းရန် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထံ တင်ပြ
ဒုတိယသမ္မတ အမည်စာရင်းကို ထပ်မံတင်သွင်းရန် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထံ တင်ပြထားကြောင်း သတင်းများ အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
အခြားသတင်း တစ်ရပ်အရ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ ဒုတိယသမ္မတ ဖြစ်မလာပါက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှဌေးဝင်း ဖြစ်လာနိုင်ကြာင်း သတင်းထွက်ပေါ်နေသည်။
ယင်းသတင်းများကို The Voice Weekly ကအတည်ပြုနိုင်ရေး ကြိုးစားနေသော်လည်း အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အဆိုကိုတင်သွင်းသူ ကန်လွှတ်တော် အမတ် မက်ကော်နယ် တို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ဆွေးနွေး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုရေး အတွက် သက်တမ်းတိုးရေး အဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့သူ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ် မက်ကော်နယ် နှင့် ဇူလိုင်လ ၁၆ရက်နေ့ည ၈ နာရီတွင် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်စကားပြောခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ပြောဆို ဆက်သွယ်ဖြစ်သည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို သံတမန် အဆင့်အထိ ဆက်သွယ်တိုး တက်လာခဲ့သည် ဖြစ်သည့်အတွက် ဆက်ဆံရေး ဆက်လက် တိုးမြှင့်ရန် ကိစ္စ ၊ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို တဖြည်းဖြည်း တက်လှမ်းလာသည် ဖြစ်သည့် အတွက် အမေရိကန်မှ လည်း လျော့ပေါ့ပေးသည့် အရှိန်အဟုန်ကို မြှင့်တင်ရန် ကိစ္စ နှင့် မြန်မာပြည်သူလူထု ဘဝ ပိုမိုတိုး တက်သာယာရေး အတွက် အမေရိကန်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုတိုးမြှင့်လာ စေရန်စသည် တို့ကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြကြောင်း ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအုန်းကြိုင်၏ ပြောကြား ချက်အရ သိရသည်။
မစ္စမက်ကော်နယ်သည် Burma Freedom In Democracy Act of 2003 ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အမေရိကန် အထက် လွှတ်တော်တွင် အဆိုအဖြစ်စတင် တင်သွင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်း ထပ်မံ တိ်ုးမြှင့်ရန် အဆိုကို လည်း တင်သွင်းထား သူဖြစ် သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု (SANCTION) နှင့် ပတ်သက်၍ လည်း အဓိကအရေးပါသည့် ပုဂိုလ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအုန်းကြိုင်က “မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ အခြေအနေကောင်းသွားမှာပါ ကောင်းတဲ့ရလာဒ်တွေထွက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ဥက္ကဌကလည်း ပြည်သူလူထုကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုရင် ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ လုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့ပြီး သားပါပဲ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို လက်နက် သဖွယ် အသုံးပြုနေသည့် ဟူသော ပြောစကားများမှာ စိတ်ကူး ပင်မရှိဟု ဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို
လက်နက် သဖွယ်အသုံးပြုနေသည့် ဟူသော ဝေဖန်မှုများသည် သူမအနေဖြင့် စိတ်ကူးကြံစည်မှု ပင် မရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့ ဇူလိုင်(၁၇)ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူက ဆိုသည်။
Without residency permits, their children cannot enrol in public schools. Mr Abdul Majid said Burmese children attend charity schools created for the community by Saudi donors and wealthy Burmese ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာအရေးအား ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းအများစုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော BC (UK) သည်လည်း ဝေဖန်ခြင်း မပြုခဲ့သည်ကို မာ့ခ် ဖာမနာ အနေဖြင့် မည်သို့ ဆင်ခြေပေးမည်လည်း စိတ်ဝင်စားမိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများ၏ လူ့အခွင့်အရေးအား နိုင်ငံပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်လေသလောဟု သံသယဖြစ်လာပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာများ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသရရှိရန် ကြိုးပန်းနေမှုများအား http://www.globalasia.org တွင် ဆောင်းပါးရှင် Thanawat Pimoljinda မှ ၂၀၁၀ မတ်လတွင် ရေးခဲ့သည် Ethno-Religious Movements AsaBarrier to an ASEAN Community တွင် The Rohingya Solidarity Organization (RSO) and the Arakan Rohingya National Organization (ARNO) in Burma have been fighting to liberate Arakan from Buddhist rule, with the aim of establishing an Islamic state. ဟု ဖော်ပြထားပြီး Wikipedia ရှိ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ရေးသားထားသည်တွင် Post War တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားသည်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
The Mujahid party was founded by Rohingya elders who supported jihad movement in northern Arakan in 1947. The aim of Mujihid party was to createaMuslim Autonomous state in Arakan. ထို့အတူ Jane's World Insurgency and Terrorism တွင် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ဖော်ပြထားသည်တွင် RSO နှင့်ပါတ်သက်ပြီး
The group also aimed to establish an Islamic autonomous Rakhine (Arakan) state, uniting the Rohingya people of Myanmar and Bangladesh ဟု ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးများစွာ ရေးခဲ့သည့် ဘာတီးလစ်တာနာ ဆောင်းပါးများတွင် လေ့လာလျင်လည်း တွေ့နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မာ့ခ် ဖာမနာ ပြောဆိုသည့် we have never even heard any Rohingya organization saying they want their own state ဆိုသည်မှာ မုသားမျှသာ ဖြစ်ပေသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/17/2012 1 အကြံပြုခြင်း
မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း မြန်မာဘင်္ဂလီများထံမှ လာဒ်အမြောက်အများစားမှုဖြင့် ဒု-ဗိုလ်မှူး ဦးအောင်ကြီးအား
ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က နယ်ပြည်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းနှင့် ၎င်းအမှုများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုရှိသူ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ
ဦးအောင်ဆန်းနေနိုင်အောင်အား ယခုသတင်းပတ် သောကြာနေ့က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း မောင်တောမြို့ ခရိုင်ရုံးမှ အတည်ပြုပြောသည်။ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဦးအောင်ကြီးက အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းမှုများတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူ အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် ၃ ဦးထံမှ ကျပ် သိန်း၉၀၀ စီ ယူပြီးခြစားကာ လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း မောင်တောမြို့ နစကအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ကောလဟလသတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ဦးအောင်ကြီး ကိုင်တွယ်ခဲ့သော ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ သောကြာနေ့က လာဒ်ငွေများဟု ယူဆရပြီး ၀င်လာသည့် ကျပ် သိန်း ၈၀၀ အား ဘူးသီးတောင်မြို့
ဗျူဟာက သိမ်းဆည်းလိုက်ကြောင်း နစကအောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အခြေစိုက် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲရေးမှူးဋ္ဌာနချုပ် (စကခ) ၁၅ ဗိုလ်မှူးချူပ်ကျော်သက် ဦးဆောင်သော တပ်မ လက်အောက်တွင် တပ်ရင်းပေါင်း ၁၀ ရင်းရှိပြီး၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသအတွင်း ခမရ ၅၅၁နှင့် ခမရ ၅၆၄ စစ်ကြောင်းများ လှုပ်ရှားနေကြောင်းနှင့်
တောင်ပိုင်းတွင် ခမရ ၅၃၆၊ ၅၆၅နှင့် ခမရ ၅၃၇ စစ်ကြောင်းများ လှုပ်ရှားနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ကျန်စစ်ကြောင်းများပါ များမကြာမီလှုပ်ရှားနိုင်ရန် ပြင်ဆင်မှုများ ရှိနေသည်ဟု စစ်တပ်သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုသည်။
မြန်မာအပေါ် စီးပွားပိတ်ဆို့ မှု လျော့ပေးခဲ့တဲ့ထဲ အမေရိကန် ကုမ္မဏီတွေအတွက်ဘဲ အသာရနေ
အမေရိကန်က မြန်မာအပေါ် စီးပွားပိတ်ဆို့ မှု လျော့ပေးခဲ့တဲ့ထဲ အမေရိကန် ကုမ္မဏီတွေအတွက်ဘဲ အသာရနေပြီး မြန်မာပြည်က ပို့ ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေတွက်တော့ မပါရှိသေးတဲ့အတွက် တလမ်းသွား တဖက်သတ် ဖြစ်နေတယ်လို့ သမတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်သူလွတ်တော်ဆီ သ၀ဏ်လွာပေးပို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအပါအ၀င် န၀မနေ့ လွတ်တော် အခြေအနေတွေ ဦးဇော်ရိုက ပေးပို့ ထားပါတယ်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအမေရိကန်ဖြေလျော့ပုံမျှတခြင်းမရှိဟုပြောခြင်းအပေါ်Ongoing Proces ဖြစ်၍ဟုUS-ASEAN မှတွဲဘက်ဒါရိုက်တာပြောကြား by Yangon Media Group on Monday, July 16, 2012 at 6:43am · စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အမေရိကန်ဖြေလျော့ ပုံမျှတခြင်းမရှိဟု ပြောခြင်းအပေါ် Ongoing Process ဖြစ်၍ဟု US-ASEAN Business Council မှတွဲဘက် ဒါရိုက်တာပြောကြား
ဇော်ထိုက်(Yangon Media Group)
အမေရိကန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုများကိုဖြေလျော့ သည်ဟုဆိုရာတွင်ယင်းတို့ဘက်အတွက် အကျိုးအမြတ် ရရှိစေရန်ကိုသာကနဦး ရှေးရှုးလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ကိုမှုအ ကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်း မရှိကြောင်းမကြာ မီရက်ပိုင်းအတွင်း ကလွှတ်တော်အ တွင်း ပြောကြား ခဲ့ခြင်းအပေါ်ယင်းသို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ ဖြေလျော့ရေးလုပ်ငန်းစဉ် များသည် Ongoing Process (ဆောင်ရွက်နေဆဲ) ဖြစ်၍ထိုသို့ဖြစ် နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း US-ASEAN Business Concil မှ တွဲဖက် ဒါရိုက် တာ Mr.Anthony Neison က ပြောကြားလိုက်သည်။
ယင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ယနေ့ နေ့လည်၁၂နာရီတွင်ဆီဒိုးနားဟိုတယ် ၌ကျင်းပသော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ်၏မေးမြန်း ချက်ကိုထိုကဲ့သို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။Mr.Anthony Neison ''ဒါကဆောင်ရွက်နေဆဲ လုပ်ငန်းပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ဆောင် ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း စဉ်တွေ အဆင့်တွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ် သတ်ပြီး ကန့်သတ်ချက်တွေ ကလည်း အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။နောက် နှစ်နှစ်လောက် ဆိုရင်တော့ဒီထက်အ များကြီး ပိုလုပ် လို့ ရလာမှာပါ'' ဟုပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန် အစိုးရအနေ ဖြင့်အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများအားဖြေ လျော့ရာတွင်ယခုအခါအမေရိကန်စီး ပွါးရေး လုပ်ငန်း များ ကိုမြန်မာနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ် သော်လည်းမြန်မာ့ ထုတ်ကုန် များ ကိုမှု လက်ခံခြင်းမရှိသေးရာ ယင်းအချက် သည်တရားမျှတမှုမရှိဟုမကြာမီရက် ပိုင်းက လွှတ်တော် အတွင်း၌ပြောကြား ခဲ့ကြသည့်အပြင်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်း အချို့ကလည်း ထိုကဲ့သို့သုံး သပ်လျှက် ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်နိုင်ငံ ရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပိတ်ဆို့မှု များပြုလုပ်ထားခဲ့သောနိုင်ငံများမှာအီး ယူ အဖွဲ့ဝင်၂၇ နိုင်ငံ၊အမေရိကန်၊ကနေ ဒါနှင့် ဩစတြေးလျတို့ဖြစ်ရာယင်းတို့ အနက်အီးယူသည် လက်နက် ကုန်သွယ် မှုမှ အပကျန်ပိတ်ဆို့မှုများကိုတစ်နှစ် ဆိုင်းငံ့၊ဩစတြေးလျသည်လည်းလက် နက်ကုန်သွယ် မှုမှ လွဲလျှင်ကျန်အချက် များ ကိုဖြေလျော့ခြင်း၊ ကနေဒါသည် လည်းများ စွာဖြေ လျော့ခြင်း များ ကိုဆောင် ရွက်ပေးထားပြီဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံအနေ ဖြင့်မှုမြန်မာနိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ကိုဆောင်ရွက်လာ ချိန်မှ စကာ ကနဦး နေဖြင့်ယခင်တပ်မ တော်အစိုးရလက်ထပ်တွင်ဗီဇာပိတ်ထား သောသူများ ကိုပြန်လည် ခွင့်ပြုခြင်း၊ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုကိုအမေရိကန်ဘဏ် များက ပိတ်ထားရာမှပြန်လည်ခွင့်ပြု ခြင်း နှင့် ယခု အခါအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ များကိုပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမည်မဖေါ်လိုသူမြန်မာ့စီးပွါးရေး ပညာ ရှင်တစ်ဦးက''အမေရိကန်ကမြန်မာကို စီးပွါးရေး ပိတ်တုန်းကလည်းတစ်ဆင့် ခြင်းပိတ်တာဖြစ်သလိုအခုဖြေလျော့ လိုက်တော့လည်း တစ်ဆင့်ခြင်း ပဲလျော့ မှာလို့နားလည်တယ်။ခုမြန်မာ့ပို့ကုန် တွေကိုလက်မခံတာကတော့နစ်နာတယ် ဆိုပေမယ့် သူတို့မ္ပဏီတွေ အရင်က လုံးဝမလာတာကနေအခုလာရင်လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် အရမ်း အကျိုး ရှိမှာကတော့ သေချာတယ်။အားလုံး ကတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းမှပဲဖြစ်လာမှာ ပါ'' ဟုပြောကြား ခဲ့သည်။
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများ ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြု လိုက်သည့်အချိန်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မြန် မာနိုင်ငံသို့ Google ၊GE ၊နှင့် Boing အပါအဝင်အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ၃၆ ခုသည်ဇွန်လ ၁၄ရက်မှ ၁၆ရက် အထိ စီးပွါးရေးလေ့လာရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်၏မြန်မာအ ပေါ်စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုဖြေလျော့ရေး အလားအလာနှင့်စပ်လျဉ်းကာယင်း ကုမ္ပဏီ ၃၆ခု၏ရှေ့ပြေးကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်လာရောက်သည့် Doilitte ၏ အုပ်ချုပ်မှု အကြံပေး ဦးချစ်ထွန်းဖေက ''ဒီကိစ္စကိုလွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်က စပြီးလေ့လာကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန် တော်လည်း ဆန်ရှင်ရေးရာကျွမ်းကျင် သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။နံပတ်တစ်က အမေရိကန်ရဲ့ ဆန်ရှင်က တခြားနိုင်ငံ တွေထက်စာရင် very complicated (အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အနေအ ထား)ပေါ့။ Technical အရကိုက် ဖြစ်နေတာပါ။နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်သ လိုနိုင်ငံရေး နဲ့မဆိုင်ပဲသူရဲ့ bureaucratic ntaure (ဗျူရိုကရေစီသ ဘောတရား) ကိုကရှုပ်နေတဲ့ ဟာတွေ ရှိတယ်။သူတို့လည်း ဥပဒေတွေနဲ့အ မျိုးမျိုး နဲ့လုပ်ခဲ့တာ ဆိုတော့အဲဒါ ကိုပြန်ဖြေဖို့ဆိုတဲ့ဟာကကွန်ရက်စ် ကိုမေးတော့ကျွန်တော်ကိုပြော တာကတော့ သူ့လမ်းကြောင်း အရ တော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံး တစ်နှစ်၊တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာ မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဇန်နဝါရီလောက်က မေးတဲ့အချိန်မှာပြောတာပါ။ဒါပေ မယ့်လက်ရှိ အမေရိကန်ရဲ့ အုပ်ချုပ် ရေးကကော၊မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေ တဲ့တိုးတက်မှုတွေကကော နှစ်ဖက်စ လုံးကရှေ့ရွေ့အောင် လုပ်နေတာကျွန် တော်တော့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော့် အမြင်အရတော့လက်ရှိမှာကုမ္ပဏီ အားလုံးလုံးက အမေရိကန် အစိုးရ ကိုမေးကြတဲ့အပိုင်း ကသူတို့မှာ Clear black or white understanding (တိကျရှင်းလင်း တဲ့အဖြေ) တော့မရဘူး။ ဥပဒေ အရတော့အ တားအဆီး တွေရှိနေကြတုန်းပဲ။ဒါ ပေ မယ့် ကျွန်တော်ကြား ထားတဲ့တစ်ခု ရှိတာကတော့ ဖြစ်လာမယ့် ကိစ္စတစ်ခုချင်းစီအရ (စနေကျင်း ပမယ့် အခမ်းအနားမှာလည်း သိကောင်းလည်း သိရမှာပေါ့)တစ်ချို့ကဏ္ဍတွေကို တော့ special permit (အထူး ခွင့်ပြုချက်) သဘောမျိုးနဲ့သုံးသပ် ခွင့်ပြုတာမျိုး ဖြစ်လာ နိုင်မယ်လို့ထင် တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဥပဒေအ ရဖြစ်နေတာကိုတော့ ဘယ်သူမှကျော် လွှားလို့မရဘူး။ ဖြေဖို့ဟာကိုအင်စတီ ကျူးရှင်း အရတော့သွားရဦး မှာကိုး။ ကျွန်တော်ရဲ့ခန့်မှန်းချက် ကတော့အဲဒီလို ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းစီ၊ ကဏ္ဍ တစ်ခုချင်း စီအလိုက်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆတယ်။ ကျွန်တော်အမြင်မှားရင် လည်းမှားမှာပေါ့။ ကုမ္ပဏီတွေဘက်က တော့ဒီကိစ္စကိုအမေရိကန်အစိုး ရကိုလည်း အမြဲမေး နေပါတယ်။ ကျွန် တော်ဒီကိုမထွက်လာခင်ပြီးခဲ့တဲ့အ ပတ်(ဇွန်နောက်ဆုံးပ တ်)အထိကတော့ဥပဒေတွေကတော့ အရင်အတိုင်း အတူတူပဲ။ထူးခြားတာ ကတော့သူတို့က update လုပ်မယ် ပေါ့အဲဒီအနေအထားမှာရှိနေပါ တယ်'' ဟုပြောကြား ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့ မှုပြုထားသော နိုင်ငံ၃ဝအနက်ကနေဒါ နိုင်ငံသည် အလုံး စုံပိတ် ဆို့မှုပြုလုပ်ခဲ့ သောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အခြား၂၉နိုင်ငံသည် ကဏ္ဍအလိုက်ပိတ်ဆို့မှုများကိုသာပြု လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးပြစ်မှုလို့ လူသိများတဲ့ ပုဒ်မ ၅ည ဖျက်သိမ်းဖို့ ပြည်ထဲရေးဒု ၀န်ကြီးကသဘောတူ
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းဝေးမှာ နိုင်ငံရေးပြစ်မှုလို့ လူသိများတဲ့ ပုဒ်မ ၅ည ဖျက်သိမ်းဖို့ ပြည်ထဲရေးဒု ၀န်ကြီးက သဘောတူလိုက်တာကြောင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ဥပဒေမူကြမ်း တင်သွင်းဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။ ဒီဗီဘီသတင်းထောက် ဇော်ရို တိုက်ရိုက် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ (ရိုက်ကူး ဇေကြီး)
by Heinn FiveStrings on Tuesday, July 17, 2012 at 6:39am ·
မျက်ရည်တွေတွေ ကျရင်း ပြန်စဉ်းစား ..
စစ်တွေမှာ -GTC- ကျောင်းသူများ အကြမ်းဖက် ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ရိုက်နှက်ဖျက်ဆီး လူသတ်ရန်ကြံစည်ခြင်း ခံရပြန်ပြီ
စစ်တွေမြို့ နဲ့အလှမ်းဝေးကွာလွန်းတဲ့ရေချမ်းပြင်ကျေးရွာဖက်မှာ တည်ရှိတဲ့-GTC_ ကျောင်းဟာ ကျောင်းသားတွေအဖို့အတော် ကသီလင်တ ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာ တည်ရှိနေတာဖြစ်တယ် ။ ကျောင်းသားထုတွေက လူအုပ်နဲ့ စုပြီး ရှိနေတတ်တာမို့န၀တ-နအဖ-ခေတ်က ကျောင်းသားတွေ မစုမိရအောင် အခုလို မြို့ ပြင် ဇနပုဒ်တွေမှာ လူတွေနဲ့အလှမ်းကွာအောင် ထားခဲ့ တာဖြစ်တယ် ။ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့မြက်ခင်းပြင်တွေ ၊ ရွှံ့ နွံ့ ဗွက်တောတွေ ၊ လယ်ကန်သင်းတွေကြားကနေပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟာ ကျောင်းတက်နေကြရတယ် ။ မြို့ ထဲကနေပြီး ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ပြေးဆွဲနေတဲ့ဘတ်စ်ကားခက ဈေးကြီးလို့မကြာမကြာဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေရတာလဲ ကြားနေရတယ် ။ စစ်အစိုးရရဲ့အမွေဆိုးကို ခုအချိန်ထိ ခံစားနေရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာ ဒီနေ့ တော့ ဘ၈င်္လီမွတ်ဆလင် ကုလားတွေရဲ့အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှုကနေပြီး ကံကောင်းလို့အန္တရယ်ကြီးစွာ မခံစားရဘဲ လွပ်မြောက်သွားခဲ့ ရတယ် ။ ကားသမားကလွှဲလို့အခြားကျောင်းသူတွေ ဆရာမတွေက ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရရှိခဲ့ ကြလို့သိရတယ် ။ လုံခြုံရေးကားရောက်လာလို့ဘေးမသီရန်မခဆိုတဲ့သဘောပါဘဲ ။ ပြောချင်တာက တက္ကသိုလ်ဆရာမတွေကတော့ အလုပ်ပြုတ်ရင်လဲ ပြုတ်ပါ့လေစေတော့ ဆိုပြီး ကျောင်းကို မတက်တော့ဘူးရယ်လို့ထုတ်ဖေါ်ပြောသွားတာပါဘဲ ။ ဒီစကားကြားတော့ ၀မ်းနည်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်ရပါတယ် ။ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ မှာ အဓိကရုဏ်းတွေက ထင်ထင်ရှားရှား သိသိသာသာ မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ပြောက်ကျားတိုက်ခိုက်နေတာတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တယ် ။ မီးရို့ ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့ နေရတယ် ။ ရေကန်တွေကို အဆိပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ တွေ့ နေရတယ် ။ မနေ့ ကတင်ဘဲ စစ်တွေမြို့ ရဲ့ တောင်ပိုင်း မြစ်ဝမှာ လက်နက်တွေနဲ့ အတူ လှေတစီးကို ဖမ်းဆီးရတယ်။ ရေတပ်က တားဆီးတာကို ပြန်ပြီးတော့ ခုခံပစ်လို့သေနတ်နဲ့ ပစ်ဖေါက်ပြီးမှ လက်နက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးမိတာဖြစ်တယ် ။ တယောက်ကတော့ စစ်တွေဆေးရုံမှာ အတွင်းလူနာအဖြစ် တက်ရောက်နေရတယ် ။ ကျန်တဲ့ လူတွေကိုတော့ အချုပ်ထဲထားလိုက်ရတယ် ။ ဖမ်းခံထိတဲ့ သူတွေက ရခိုင်စကားကို အနည်အကျဉ်း ပြောတတ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ် ။ ကယုချောင်းခေါ် တက်က္ကနတ်မြို့ က ဆိုပြီး သူတို့ ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့င်္ရှနိုင်ငံသားလို့ဝန်ခံကြတယ်လို့ ပြောတယ် ။ ပြောချင်တာက ဘ၈င်္လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေက ဘာဖြစ်လို့လက်နက်တွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်က စစ်တွေမြို့ ရဲ့တောင်ဖက် ကဉ္ဖပ-နဒီမြစ်ကြောထဲမှာ ရောက်လာရတာလဲ ဆိုတာပါဘဲ ။ စောစောကပြောခဲ့ သလို စစ်တွေမြို့ ထဲမှာ ပြသနာက မငြိမ်းချမ်းသေးဘဲနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းဖွင့်တာဆိုတာဟာ တကယ်တော့ အခုလို ပြသနာတွေထပ်ဖြစ်စေဖို့မီးမွှေးလိုက်တာဘဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ် ။ မြို့ ပြင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ ကျောင်းကို ဘယ်လိုမှ ပြသနာမဖြစ်ရင် ထားလို့ ရပေမဲ့အခုလို အချိန်မျိုးမှာ မြို့ ပြင်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားစေတာဟာ ဘယ်လိုမှ အလားအလာ ကောင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါဖြင့်ရင် မြို့ တွင်းမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကို ထားရမလား ဆိုတာကလဲဘဲ စဉ်းစားစရာအချက်အလက် တခုဖြစ်လာနေတယ် ။ ဒုတိယအချက်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအတွက် လုံခြုံရေးဘဲဖြစ်တယ် ။ သူတို့ တွေအတွက် လုံခြုံရေးအပြည့်အ၀ မရှိရင် ကျောင်းတက်ဖို့ ဆိုတာကို ထားဦး ။ ပုဒ်မ္မ ( ၁၄၄ ) မရုပ်သိမ်းဘဲနဲ့ကျောင်းတက်ရမယ်ဆိုတာကို တာဝန်ရှိသူတွေက ဘယ်တော့မှ မပြုလုပ်အပ်ဘူးလို့ထင်တယ် ။ တတိယအချက်က လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို မြစ်ကြောထဲမှာ စက်လှေနဲ့အတူ ဖမ်းဆီးရတယ်ဆိုတာဟာ မတွေးဝံ့စရာဖြစ်တယ် ။ တကယ်လို့ရေတပ်ကသာ မတွေ့ ဖြစ်ခဲ့ ရင် သူတို့ တွေ ဘယ်ကို သွားပြီး ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ဘယ်နှစ်ယောက်များသတ်ဖြတ်ပြီး သွားကြမှာလဲဆိုတာ စဉ်းစားရင် သိသာနိုင်တယ် ။ ဒီလိုဘဲ သူတို့ လို မတွေ့ တဲ့လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဘယ်နှစ်စီး ဘယ်နှစ်ယောက်ကများ ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့မှာ ပုန်းအောင်းခိုဝင်ရောက်ရှိသွားကြပြီလဲ ဆိုတာ သတိထားစစ်ဆေးရတော့မယ် ။ တချိန်တည်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်အပါအ၀င် တာဝန်ရှိသူတွေက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်သူတွေနဲ့လက်နက်တွေကိုပါ ဖမ်းဆီးမိထားတာတွေ ပြီးတော့ ဒုက္ခသည်စခမ်းတွေ ဖွင့်လွှစ်ထားတာတွေ - အကူအညီ ပေးထားတာတွေကို ရှင်းလင်းကြေညာသွားတယ် ။ ပြောချင်တာက အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင် သမားတွေကို အတိအကျ ဖေါ်ပြရမှာနဲ့ NGOs တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများကို အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောသင့်တယ်လို့ ထင်တယ် ။ အခုအချိန်မှာ တကယ့်အရေးတကြီး စဉ်းစားရမှာက ပြသနာကို အတိမ်အနက် စဉ်းစားကြည့်ရတော့မှာဖြစ်တယ် ။ ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင် အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များအဖြစ် ယခင်က နေထိုင်လာခဲ့ တုံးက ခုလို သွေးထွက်သံယိုမှုများစွာနဲ့တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လုပ်ပေးရမယ်လို့မတောင်းဆိုခဲ့ ဘူး ။ ခုတော့ လက်နက်အားကိုးနဲ့ တင် တောင်းဆိုလာနေပြီဖြစ်တယ် ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေက သမိုင်းသုတေသီတွေဟာ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းအချက်အလက်ထဲမှာ ဒီမွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် လူမျိုးတွေကို သူတို့ ပြောပြောနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ မရှိဘူးလို့သမိုင်းအချက်အလက်နဲ့ထုတ်ဖေါ်တင်ပြတာတွေဘဲ ပြုလုပ်တာရှိတယ် ။ ဒီတော့ သူတို့ ကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့သူတို့ မှာ ပြောပိုင်ခွင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိသလို သတ်မှတ်တာဟာ အစိုးရဘဲဖြစ်တယ် ။ ဒါ့ကြောင့်လဲဘဲ အစိုးရကနေပြီး လက်နက်မဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကို တိတိကျကျ အကာအကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် ။ ဘင်္ဂလီမွတ်တလင် ဘာသာဝင်လူမျိုးတွေက အခုလို လက်နက်အားကိုးနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ရင် ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အနေနဲ့လက်နက်နဲ့ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရဖို့အစိုးရက ရခိုင်လူမျိုးကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်တယ် ။ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဆိုတာမျိုးဟာ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကို စောင့်ရှောက် ကာကွယ်တဲ့အနေအထားရှိတယ် ။ တကယ်လို့ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်လူမျိုးတွေက အခုလို လက်နက်အားကိုးနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်လာတာမျိုးဟာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖို့ အတွက် တောင်းဆိုလာခြင်းဆိုရင် အစိုးရက ပြတ်ပြတ်သားသား ဖြေရှင်းတိုက်ခိုက်ခြေမှုန်းရမှာဖြစ်တယ် ။ အခုဟာက လက်နက်ကိုင် အစိုးရက တခြားဖြစ်နေပြီး လက်နက်မဲ့ရခိုင်လူမျိုးက အလယ်ကမြေဇါပင် ဒါးစာခံလို ဖြစ်နေတယ် ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်နေတာကိုကြည့်ရင် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်နဲ့ဗုဒ္ဒဘာသာရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တယ် ။ ကုလားတွေက လက်နက်နဲ့ လူအုပ်နဲ့တိုက်ခိုက်တာကို ကမ္ဘာက မသိဘူး ။ သူတို့ တွေက ကမ္ဘာကို သတင်းလိမ်နဲ့ဓါတ်ပုံတွေလိမ်ပြီး တင်ပြနေတယ် ။ ဒါကို အစိုးရက ပြန်လှန်ရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ် ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေက ဖြေရှင်းနေရတော့ ဒါဟာ အစိုးရဖြေရှင်းတာလောက် မထိရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ပြောချင်တာက အစိုးရက ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ ဒါကို ညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်အရ အတည်ပြု ကြေညာပြဋ္ဌန်းဖို့ လိုတယ် ။ တိတိကျကျ ပြောရရင် ဂျီဟပ်စစ်ဆင်ရေး လုပ်မယ်လို့အင်ဒိုးနီးရှားနိုင်ငံနဲ့အခုဆိုရင် မွတ်ဆလင် နိုင်ငံပေါင်းမြောက်မြားစွာက မြန်မာနိုင်ငံကို စိန်ခေါ်နေပြီဖြစ်တယ် ။ ဂျီဟပ်စစ်ဆင်ရေးဆိုတာက လှည်လှီးသတ်ဖြတ်မဲ့စစ်ပွဲလို့ကြေညာတာဖြစ်တယ် ။ အင်ဒိုးနီးရှားနိုင်ငံအစိုးရက ဂျီဟပ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့သူတို့ ဟာလဲဘဲ ပြည်သူတွေရဲ့အလိုကျ လက်ခံရမဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ထားဖို့ လိုတယ် ။ အခုဖြစ်နေတာဟာ ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ တင် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ကုလားတွေနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုပါ စိန်ခေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျင်းပနေတဲ့ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက လက်ခံနားလည်ပေးဖို့ လိုတယ် ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ထိုးကျွေးထာမျိုး လုပ်နေလို့ ကတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ် ။ အခုအချိန်မှာ သမ္မတ ကြီး ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တိတိကျကျ ပြောထားတယ် ။ အဝေးရောက် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံညွန့် ပေါင်းအစိုးရ-၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ ဒီစကားပြောတာ အကောင်းဆုံးဘဲလို့ထောက်ခံပြီး ပြောသွားတယ် ။ ပြောချင်တာက သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတကာတွေ ၊ NGOs -တွေရဲ့ပယောဂတွေနဲ့အကြမ်းဖက် လက်နက်ကိုင်ပြီး တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုပေးရမယ်ဆိုပြီးကြိုးစားလာမှုတွေကိုတော့ တရားဝင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကနေပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကြေညာချက်သာ ထုတ်ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ် ။။။
ဥက္ကဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်း မရှိပဲ လာရောက်လည်ပတ်ပြီး သတင်းသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီကေ​န့ ဇူလိုင် ၁၇ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခေတ္တနားချိန်မှာ သတင်းသမားများ သတင်းယူရန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခန်းကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်း မရှိပဲ လာရောက်လည်ပတ်ပြီး သတင်းသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံသွားပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ သတင်းထောက် ဇော်ရိုက တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးသူ ဦးခင်မောင်လှ ရန်ကုန်မှာ တိမ်းရှောင်နေ အာရကန်တိုင်းမ်စ်
“သူက နာဇီဈေး (စက်ရုံစုရပ်ကွက်)မှာ -၁၀-နှစ်ကျော်လောက်နွးသားသတ်လိုင်စင်ကို ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ကပ်ပေါင်းပြီး တဦးတည်းလေလံဆွဲခွင့် ရထားသူဖြစ်တယ်။ ငွေကြေးတောင့်တင်းသူမို့ရဲ တွေထောက်လှမ်းရေးတွေဟာ သူ့ တပည့်လုံးလုံးဖြစ်ကြရတယ်။ ၁၉၉၀-ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်တွေမြို့ နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၀င်ရောက်ခဲ့တယ်။ အခုအဖမ်းဆီး ခံနေရတဲ့ AFZက ရှေ့နေဦးကျော်လှအောင်နဲ့အတူတူ ၀င်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ လန်ဒန်က ထွန်းခင်၊ ၀ါကာအူဒင်၊ ဘစိန်၊ မောင်စိန်၊ နုရုအာလမ်တို့နဲ့ အဆက်သွယ်တွေလည်းရှိတယ်။ မနေ့က ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးအယောင်ဆောင် သင်္ကန်းစည်းပြီး နေအိမ်တွေကို မီးရှို့ နေတာတွေ၊ လူသတ်နေတာတွေကို အကွက်ကျကျလုပ်ဖို့ စေခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်။ မနေ့က မွတ်ဆလင် ဘင်္ဂလီ ပြောတဲ့ဖြောင့်ချက်အရ သူက ရခိုင်လူမျိုးတဦးကို လည်လှီးပြီး ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုသတ်ဖြတ်ဖို့အတွက် ဦးခင်မောင်လှက အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖြောင့်ချက်ပေးနေတယ်။ ဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတဲ့ ဦးခင်မောင်လှကို အမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်မှဖြစ်မယ်။ သူက အခု ရန်ကုန်ကို တိမ်းရှောင် ရောက်ရှိနေပြီး ရန်ကုန်ကဘဲ ကြိုးကိုင် စေခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။”ဟု ကိုခိုင်ထွန်းမှ အာရ်ကန်တိုင်းမ်စ်သို့ ပြောသည်။